China Nico orinasa sy ny mpanamboatra | inShare
Product name: Nico
Description: fanary vape penina
Battery fahaiza: Naorina-in 280 Mah lithum bateria
indray misintona : Tokony ho 300 mampieboebo (Araka ny tsirairay fampiasana)
mamaly ny fomba: fanary, atsipy rehefa avy mampiasa
Vape penina lanja: 15.4g
Vape size: 94,4 * 15.5 * MM 6.5
MOQ: 100 napetraka, OEM / ODM mba mila milentika 1000
Certifications: am.fi, RoHS
New fanary foana vape fitaovana ho an'ny cbd penina na e-ranom
Nico fanary Vape Pen Fampianarana
Bika Aman 'endrika: Ity no vaovao fisaka karazana fanary vape penina, aluminium firaka fitaovana, taratasy ambonin'ny vokany, samy hafa randram-taratasy fametaka amin'ny fomba samy hafa.
Haka sy ny mitaiza kely, mora ny miasa.
CBD & E-ranom-pod: Ny fahafahana tanky 1.2ml, tokony ho 280 mampieboebo. Tsy fanary pod izay tsy azo soloina.
Battery: Naorina-in 280mAh bateria, fanary mampiasa, tsy ilaina ny anjara-raharahan'i Arona manipy azy rehefa avy mampiasa.
Nico fanary Vape Pen famaritana
Product anarana & Model
tsy misy lamba fanakonana Display
Fanary tanteraka, atsipy rehefa avy
namboarina manan-karena voankazo tsirony amin'ny fonosana maro loko manjelatra
1.2 ml for cbd & e-ranom
(Haavo) 94.0 * (Sakany) 15.5 * (hateviny) 6.5mm
Naorina-in na ivelany Battery
Battery fahaiza (Mah)
280 (Naorina-in bateria fahafahan'ny 280mAH)
Air fitaterana, Express, sns
Nahoana Mifidiana inShare?
Ny R & D Team
1. Asaivo manontolo R & D ekipa: MD injeniera, elektronika injeniera, ID injeniera, sary endrika, dia afaka hihaona OEM / ODM customization ny mpanjifa samy hafa.
2. fikarohana sy ny fampandrosoana vokatra: mihoatra ny 100 mifandray Patents ny e-sigara, anisan'izany ny 10 famoronana Patents.
3. Efa niaraka, ary ampitaina amin'ny e-sigara amin'ny fikambanan'ny orinasa ao an-toerana sy any ivelany, ary efa zatra ny fenitra ara-teknika orinasa faritra isan-karazany eo amin'izao tontolo izao. Afaka mamaritra ny vokatra izay mpanjifa mila araka ny hevitra natolotry ny mpanjifa. Avy teo aloha vokatra fifanakalozam-baovao, ho fampandrosoana ny afovoany lasitra famolavolana, ny fitsapana santionana taty aoriana, dia ampy angon-drakitra misy ny mandrefy hoe, mba ho azo antoka fa mahafeno ny vokatra nanaovana ny farany, ary indrindra sisin'ny fandringanana vokatry ny tsena.
4. Laboratory fitaovana fanahafana: vacuum ratsy tsindry milina, avo sy iva hafanana fitiliana milina, bateria votoaty metatra, setroka fitiliana milina, Salt dipoavatra fitiliana milina, hovitrovitra Mpamantatra.
1. mpitantana manana eo ho eo mihoatra ny 10 taona ny traikefa.
2. Antenimieram-toerana: 54.000 famokarana toerana toradroa Ny haavon'ny 2, 10 andalana fivoriambe.
3. Vovoka-maimaim-poana atrikasa: 11.000 metatra toradroa 2, 5 andalana fivoriambe, dia afaka handraisana mpiasa 100.
4. tsindrona atrikasa: 32.000 metatra toradroa 2, 20 tsindrona koronosy milina, CNC / kilalaon'afo milina sy fitaovana fanodinana bobongolo hafa.
5. Advanced famokarana fitaovana: milina mandeha ho azy taratasy, milina mameno solika, tamin'ny laser sokitra milina, milina fanontam-pirinty lamba.
Ny Quality Control
1. tanteraka fitantanana rafitra fanamarinana ny ISO9001.
2. feno fitaovana fanaraha-maso ho an'ny famokarana tsipika: fanoherana Mpamantatra, micro fahatsapana Mpamantatra, suction manohitra Mpamantatra, USB mamaly ny fitsapana. 100% fitsapana-pamokarana vokatra mba ho azo antoka ny tahan'ny fahaizana vokatra mahatratra 99,9%.
3. Perfect famatsian rojo fitantanana, IQC tsy miankina ny fitantanana ny vondrona, hitantana akora, ary hentitra manatanteraka Narahi-maso araka ny AQL1.0 fitsipika mba hahazoana antoka fa fitaovana Narahi-hihaona kalitao takiana.
4. potoana ara-nofo manta RoHS fitiliana, ary koa ny famatsiana rojo RoHS antoka fifanarahana mba hahazoana antoka fa fitaovana rehetra hihaona Vondrona Eoropeana Narahi-tontolo iainana fitsipika.
5. Perfect kalitao dingana ara-dalàna, mba hahazoana antoka tsara, avy amin'ny loharanom-famatsiana ampy amin'ny tatỳ aoriana.
6. E-sigara ny fifohana sigara no lasa vokatra ny EU AK / RoHS / TPD taratasy fanamarinana, ary afaka ihany koa ny hihaona amin'ny ilain'ny mpanjifa ny fahaizana hanao fanamarinana ny faritra tsirairay.
fanary Cbd Hardware
fanary E-Juice Hardware
24/7 miasa isika, miantso antsika na oviana na oviana. Raha tsy hamaly ara-potoana isika, dia hiantso indray raha vao araka izay azo atao.
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,DIEM Mobile
E-Cigarette , fanary Cbd Hardware , fanary E Cigarette , Cbd Hardware , E-Juice Hardware , Original Vape Pen,